Hapana vanhu vanoitwa nhapwa, hapana vanhu vakasarudzwa, hapana nyika yakavimbiswa naMwari - Afrikhepri Fondation
Mugovera, Gunyana 18, 2021
Lhebrews vaive vanamwari veIjipita vamwari mwari Aten. Izvi ndizvo zvakawanikwa nevaongorori vaviri vekuFrance. Fungidziro yakafanotaurwa, muzana ramakore rapfuura, naChampollion. Uku kuwanikwa kuchaita ruzha. Zvinototsamwisa nzanga yesainzi uye zvinokanganisa nyika yechitendero. Kune runyerekupe kuti vamiriri vaSteven Spielberg vakawana mhepo pamusoro payo kuenda kuAtlantic uye kuti mugadziri mukuru wemuvhi anogona kuunza pachiratidziro "Zvakavanzika zveEksodho", iro basa revaongorori vaviri vechiHebheru (1).
Inzwi reSigmund Freud
Chii Messod naRoger Sabbah vanotiudza? Zvakaitwa naLotois Jean-François Champollion, zvakanaka pamberi pavo, zvichida vakanzwa - akafumira kare kare kusvika pakuguma kwekutenda kwake. Icho chinonzi psychoanalyst Sigmund Freud, makore makumi matanhatu akapfuura, inyanzvi yakawanda, inofungidzirwa nokuvhunga, mumabhuku ake, pfungwa yekutumira kune vaHebheru, naMosesi muIjipita, wechitendero chake, iyo yamwari Aton . Messod naRoger Sabbah vanoenderera mberi vachikakavadzana kuti vaHebheru vose ndivo vazukuru vevaEgipita vekare.
Izvo zvakatangira pakuona: hapana humwe uchapupu hwekuchera matongo hwekuvapo kwevaHebheru ava sezvavanotsanangurwa muBhaibheri. Kune nyanzvi dzakawanda, vangave vasina kujeka, sekushaiwa kwechinhu chipi zvacho chiri nani, kune "Apirous", vanhu vanoita semasidheji vane mitsara yakawanda. Izvo zvave zvichishamisika kubvira makore: vanhu vaigara sei anenge hafu yemireniyamu muEgypt, nevevanhu mweya mamiriyoni maviri, vanotiza nyika, mauto? kubva kuna Farao pazvitsitsinho zvake, ndokuzogara mu "Nyika Yakapikirwa", uye iyo inotungamirirwa neEgypt, pasina tsananguro yekugara kwenguva refu, kana kubuda kwavo? Hapana mutsara waAbrahama kunyange. Hazvizivikanwi nehondo yevasayendisiti. Hapana kunyora, hapana nhau, hapana mu temberi, hapana pasi pejecha rerenje.
Rima Farao Ai
Vatsvakurudzi vedu vaviri vanobva vadzika maonero avo pane zvinotambudza kuenzanisa kudzidza kwemagwaro, chiHebheru uye hieroglyphics. Muguva Tutankhamen, yakavhurwa 1923, vaiva akanyorwa akanyorwa dzisingazikanwe yekare, vamwe tsamba sezvimwe - chimiro, mataurirwo, dzokufananidzira ukoshi - nearufabheti yechiHebheru. Zvakaitika, panguva iyoyo, hazvina kufambisa munhu. Chero kupfuura ichi: pamadziro paguva, miviri "katuriji (akanyorwa siginicha) ane kujeka Farao Ai, ane zita iri hieroglyphs, yakafanana kuti Aramaic Bhaibheri, Mwari akazivisa Adonai (Aten-Ai). Uye, pamusuo pfuma mukamuri, vakarinda guva, avete pachipfuva, imbwa Anubis (kana ANAPI): nechiHebheru, "Nabi" rinoreva "mutarisiri mutemo." Imbwa uye chifuva zvakange zvakafukidzwa nechinhu chitsvene chichiyeuchidza munyengetero wechiHebheru che shawl. Bhokisi rechifu rinogona kufananidzwa ne "Areka yesungano" sezvinotsanangurwa muBhaibheri.
Kuitirana nharo pamusoro pekufananidzwa uku - kune vamwe vakawanda - hama dzeSabbah dzakaverenga magwaro kubva kumusoro kusvika pasi. Vakagamuchira kuti rurimi rwechiHebheru rwakabva kune hieroglyphics, rakashandurwa. Uye kubvira ipapo zvichienda, zvinhu zvose zvakajekeswa: mazita eBhaibheri, mazita asinganzwisisiki mazita nokuti vatorwa, vanhu, Nhoroondo.
Ngatidzoke shure kwemakore 3350 kumashure. Akhet-Aton, guta guru reumambo hweEgipita - nhasi unozivikanwa seTaur El Amarna - ndiro guta raFirk Akhenaton ("Ndini zuva rinoraramira") uye Mambokadzi Nefertiti. Zviri guta chiedza goridhe, iri kuchamhembe pari Assiut, pamusoro Nile, ndiro guta dzvene yamwari Aten, kuti "Mwari mumwe chete," Musiki wedenga nepasi. Akhenaten, muzvokwadi, akaputsika nevanamwari vehurumende yevaIjipita, anotonga semhedziso yakakwana. Kana akafa, Ai, izvo kuchiri muprista - pashure achaita Farao sezvo "Divine Baba Ai" - anotora itsvo simba, achivimbisa kuti regency kusvikira Tutankhamun (zvinoita kupfuura makore masere) kukura.
Zvadaro, zvose zvinowira: kereke yemadzitateguru yaAmoni, mwari mutsva, inodzorerwa, ndiyo kudzokera kune tsika. Ai Tutankhamun achava nechokwadi chokuti zvinodzimwa zvako kanomirira dambudziko iri Akhenatan tichisiya napamwe kupinda nhamo, uye mwari uyu Aton uyo akazivisa kuti vanhu vaiva vakaenzana uye kuti chete kusiyaniswa uipi!
Guta, iri Edheni (ndiro iri bhaibheri "rakarasikirwa neparadhiso"?) Ichakurumidza kusiyiwa, isati yasvika, gare gare, zvachose yakaparadzwa. Munhu wose ari inopepereswa: vapristi Aton, ari "Yadoudaé", iro zvinoumba umambo hwaJudha, vanyori, nevakuru, vepamusoro uye, pamwe navo, muduku vanhu, "ari peat guru" vanotaurwa Bhaibheri, ramangwana reIsraeri (muEgipita, "mwanakomana waR naMwari") uyo acharwisana neJudha.
Mumutsipa wavo, vanotakura kutenda kwavo kwemwechete-yekutanga munhoroondo yevanhu - tsika dzavo. Pashure pemakore ekudzungaira nekukakavadzana, ava "vaIjipita" vachatora zvinyorwa zvavo zve "Heberu-hieroglyphic" uye vanochengetedza chiyeuchidzo chezera rendarama. Ai akauraya shiri mbiri nedombo rimwechete: akazvibvisa pacheche idzi dzinotyisa uye akamudzinga se "nzvimbo yepamusoro" kune vaHiti, muvengi wekumusoro!
Kutungamirirwa kubva "paradhiso"
Yakanyanyisa chikamu chekuenda kukuru uku, kumhanya, kuenda kumaodzanyemba, mapurisa epharaoni akanyorwa nevaNubians, "Medzai" ("Mwanakomana weAi"). MuKenya, zvinozivikanwa, maMasai nhasi anoreva mwari akakurumbira, anosvitsa makore avo endarama, kuchamhembe, uye kupfeka zvishongo zvinoyeuchidza zviratidzo zvitsvene zveEgipita rekare ...
isu mazana emakore akawanda pashure yakakura iyi, udza Messod uye Roger Sabbah, vanyori panguva muBhabhironi, mhiko muvengi Egipita, achanyora rugwaro, Bhaibheri, dzakachinja nguva zhinji apo haachatyi sokuti kure uye chinonyadzisa chizvarwa cheEgipita, mazita ayo akafukidzirwa. Akavigwa ipapo, Abhurahama, akagadzira kuberekwa kwake muMesopotamiya!
Uye zvose zvinowirirana, kune vatsvakurudzi vedu vaviri: nguva yevaFarao, hupenyu hwavo, zviito zvavo, Bhaibheri uye nhoroondo yeEgipita. Abhurahama ("Ab-Rah-Am", baba vemwari Ra naAmoni)? Rakanga Akhenatan pachake yemubhaibheri Abrahamu anotevera anonzi Mwari anotaura, vachiramba vakawanda uye akauraya gondohwe panzvimbo mwanakomana wake Isaka (Farao Semenkharé, MuEgipita Saak- Ka-Ra? ); pane mumwe Akhenaton, uyo anotaura naAton, anoputsa nemwari, achibayira gondohwe (Amoni). Sara, ndiNefertiti yakanaka, Agar, ndiKiya, wechipiri mudzimai. Mosesi ("Meses")? NdiRamses I, murume wehondo, asingafungi. Aaron? NdiHoremheb, mukuru mukuru pharao. Joseph? NdiAi: vose vakavigwa mu "Faraos of Egypt" uye maimmy avo akange asisina ...
Hapana vanhu vakaderedzwa kuva varanda, kwete "vanhu vakasarudzwa", nyika isina kuvimbiswa naMwari: kana ichivarova - zvingava zvishoma - kuwanikwa uku hakuna kuderedza kutenda kweMosod naRoger Sabbah, kubva mumutsara wevaRabhi: vanovimbisa kuva nguva dzose vatendi.
Zvakavanzika zveEksodho: Mavambo eIjipita YevaHebheru
10 nyowani kubva ku € 8,90
11 yakashandiswa kubva ku4,47 €
Tenga € 8,90
Yakapedzisira kugadziridzwa munaGunyana 18, 2021 4:24 am
chikamu NHOROONDO YAKANAKA NOKUTANGA
African mavambo e Universal Dziviriro yeKodzero dzevanhu: Iyo Mandé Charter
Kufundwa kweRussia kunoratidzira GMOs ichasimbisa hutano hwevanhu mushure memazera matatu